Solar Panel, Solar Battery, Solar Mwenje - ShaoBo
zvakanakisisa zvako sarudzo
450w mono 144 hafu masero epamusoro efficency solar ...
mafashamo Chiedza 3.04.0 mhando yepamusoro 5 makore warran...
3kWh 5KWh 10KWh yakanaka mhando solar system yemumba
mobile charging+ diki yekuchengetera imba yekuchengetera solar simba...
Iyo fekitari inovhara nzvimbo ye30000 square metres, nzvimbo yekuvaka ye21000 square metres, ine mashanu solar module yekugadzira mutsara, iyo huru zvigadzirwa ndeye monocrystalline uye polycrystalline solar modules, inogona kugutsa zvakasiyana zvinodiwa nevatengi. Huwandu hwekutengesa hwakatenderedza 800-1000MW gore rega rega.
Paunotenga SHAOBO Solar zvigadzirwa iwe unogashira yemhando yepamusoro, yakavimbika girinhi simba mhinduro ine yepamusoro kuvaka, inoperekedzwa nepamusoro pemutsara webasa revatengi.
SHAOBO mono solar modules, anodaidzwawo semono solar panels ane hunyanzvi hwepamusoro, PID inoshingirira, kuita yakaderera-chiedza, kusimba kwemamiriro ekunze uye kusimba kunopesana nemamiriro ekunze akanyanya.
60 Sero Solar Monocrystalline Panels
Anoda kusvika makore gumi nemashanu eruzivo rwekugadzira, ine photovoltaic indasitiri cheni - silicon, silicon wafer, girazi, bhatiri, module uye chiteshi chemagetsi, kuburikidza neISO9001; 2015 & iso14001:2015 system certification inova nechokwadi chekuti zvikamu zveSHAOBO zvine zvakanakisa zvigadzirwa uye hunyanzvi hwekuita.